သုဂတော ဂုဏ်တော်ပွားလို့ ကိုယ်၊နုတ်၊စိတ်တို့စောင့်ထိန်းစို့။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သုဂတော ဂုဏ်တော်ပွားလို့ ကိုယ်၊နုတ်၊စိတ်တို့စောင့်ထိန်းစို့။
Posted by who who on Dec 22, 2011 in Buddhism |7comments
မနေ့က ဗုဒ္ဓေါဂုဏ်တော်အရ ဒို့ ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ ဒီပင်္ကရာ မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာ ၀ပ်ဆင်းလို့ ခန္ဓာကို လမ်းခင်းလျှက် သမ္မာ သမ္ဗောဓိ ဘုရားဆုကို ပန်ဆင်ခဲ့တယ်နော်။ ဒီနေ့ ဆက်သွားကြစို့ဆိုတော့ သုဂတောဂုဏ်တော်ကို သွားကြရမှာနော်။
သုက ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ဂတ ကတော့ ကြွတော်မူခြင်းကို ဆိုလိုတယ်နော်။ ဒီတော့ အနက်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆို တော့ ကောင်းစွာ ကြွတော်မူခြင်းဆိုတဲ့ သဘောရောက်တယ်နော်။
အင်း…မနေ့ကပြောခဲ့သလို ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဘ၀မှ စလို့ နောက်ထပ် လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းပတ်လုံး ပါရမီ (၁၀)ပါး ဖြည့်ကျင့်လာခဲ့တယ်လေ။ အဲလို ဖြည့်နေစဉ် တလျှောက်လုံးမှာလည်း မိမိရဲ့ ကိုယ်၊ နုတ်၊ စိတ် သုံးပါးလုံးကို မှားယွင်းတဲ့ အယူတွေ မကပ်ငြိအောင် သတိနဲ့ စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တယ်တဲ့နော်။ ဆိုလိုတာကတော့ ဘုရားဆု ပန်ခဲ့ သည်မှ စ၍ ဘုရားဖြစ်သည့်တိုင်အောင် အမှားအယွင်း အတိမ်းအစောင်း မခံဘဲ သတ္တ၀ါတို့ ချမ်းသာရရေး အကျိုးအတွက် ပါရမီတော်တွေကို ကိုယ်ကျိုး စွန့် အနစ်နာခံကာ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်တာပဲ။ အဲလို အဖက်ဖက်က အမှားကင်းအောင် စောင့်ထိန်းပြီး လာခဲ့လို့ပဲ ကောင်းသော ကြွတော်မူခြင်းဆို တဲ့ သုဂတော ဂုဏ်နဲ့ ပြည့်စုံတော်မူတယ်လို့ နားလည်ထားရပါမယ်။
အင်း ဒီနေရာမှာ ကိုယ်နားလည်ထားတာလေးပါ ထည့်ပြောလိုက် ချင်သေးတယ်။ အဲလို ဘုရားရဲ့ သုဂတော ဂုဏ်ကို ပွားများရင်းကနေမှ အော် ဒို့ဘုရားတောင် လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင် မမှားမယွင်းအောင် စောင့်ထိန်းလာခဲ့တာပါလား။ ငါတို့တော့ဖြင့် ဒီဂုဏ်တော်ကို ပွားရင်းနဲ့ အတတ် နိုင်ဆုံး အကုသိုလ်ကံတွေ မထိုက်အောင် ထိန်းသွားရမယ်လို့ နှလုံးသွင်းထား မယ်ဆိုရင်တော့ ဂုဏ်တော်ပွားရကျိုးနပ်တာပေါ့နော်။ ကံ၊ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်တာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာရှိရမယ့် အခြေခံ ယုံကြည်မှုပဲလေ။ ဒီတော့ မကောင်းတာမလုပ်ရင် မကောင်းကျိုး မခံရတာပေါ့။ အဲဒီကမှ တဆင့် ၀ိပဿနာ ဥာဏ်ထိတိုင် ကူးလို့ ကိုယ့်စိတ်ကလေးကို ၀ိပဿနာမဂ္ဂင်ငါးပါးနဲ့ ထပ်ဆောင်းနိုင်လို့ စုစုပေါင်း မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပြည့်အောင်ထိ မမှားမယွင်း အောင် စောင့်ထိန်းသွားမယ်ဆိုရင် ပိုတောင် အကျိုးရှိပါသေး တယ်နော်။ ဘုရား ဂုဏ်တော်ပွားရင်း ဘုရားကိုလည်း ကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက် သွားမှာမို့ အားလုံး ပွားရင်း ကျင့်သွားကြပါစို့လား။
သုဂတော – ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။ မှန်ကန်၍ အကျိုးရှိသော စကားကို ဆိုတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား။
*သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ရရန် ကောင်းစွာ ကြွတော်မူခဲ့သော မြတ်စွာ ဘုရား။
ကဲ ဒီနေ့တော့ သုဂတော ဂုဏ်တော်ပွားရင်း မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။
အမရဲ. ပိုစ် တော်တော်များများ ဖတ်ပြီး အေးချမ်းမူတစ်ခုကို ရှာချင်မိတယ်ဗျာ. ဒါပေမယ်လည်း ဒါပေမယ်လည်းးးးး
မြတ်စွာဘုရားကို သဗ္ဗုညုတ ဥာဏ်ရှင်လို့ ပြောဆိုသူတို့ကပြောဆိုတာကို မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ထိုသို့ ပြောဆိုခြင်းကို ထိုသူတို့သည် ငါ၏စကားအရ ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ကုန်။ ငါ့အား မဟုတ်မမှန်သော အားဖြင့်လည်း စွပ်စွဲကြကုန်၏ (ဟု မိန့်ကြားထားပါတယ်)။ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ရန် သုတ္တန်ပါဠိတော် ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
အမှန်က မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် သူသည် တေ၀ိဇ္ဇဥာဏ်ရှင်သာ ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားချက်တွေ သုတ္တန် များစွာမှာ တွေ့ရပါတယ်။
မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိတော်၊ ပရိဗ္ဗာဇက၀ဂ်၊ တေ၀ိဇ္ဇ၀စ္ဆသုတ်ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
အများက မြတ်စွာဘုရားကို သဗ္ဗုညု ပြောတိုင်း လိုက်မပြောမိစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ဝေမျှလိုက်တာပါ။
မဂ္ဂင်ကလည်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ငါးပါးထဲပွားမရပါဘူး။ ပွားလည်း ဘယ်လိုမှ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရား တရားတော်ကို (သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ) အပိုင်းသုံးပိုင်း၊ ဒါကို မဂ္ဂင်အနေနဲ့ပြောရင် ရှစ်ပါးပါ။ နောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးများက ဘယ်လိုကဘယ်လို ဖြစ်ပြီး သုံးပါးကိုဖြုတ်ပြီး ဟောလည်း မသိပါဘူး။
တကယ်တော့ သီလအပိုင်းကို မဂ္ဂင်နဲ့ပြောရင် သုံးပါး (သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမန္တ၊ သမ္မာအာဇိဝ)၊ သမာဓိ အပိုင်းက (သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ)ပါ။ ပညာ ပိုင်းကို မဂ္ဂနဲ့ပြောရင် နှစ်ပါး( သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ) ဘယ်အပိုင်းကို မှ ဖြုတ်ပြီး တရားကျင့်လို့ သိလို့ မရပါဘူး။ မပြည့်စုံရင်တော့ အခိုင်အမာ ပြောရဲပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားလမ်းစဉ် လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
ငါးပါးနဲ့ကျင့်လို့မရဘူးလို့ မပြောပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းအစစ်အမှန်သို့ လုံးဝမရောက်ပါ။ ဘယ်လမ်းရောက်မယ် ဆိုတာတော့ ရောက်ခြင်ရာရောက်မှာပါ။
မဂ္ဂင်ငါးပါး ကိစ္စရှင်းပါအုံး ဟူးဟူးရေ…။ မှားရေးတာလား တခုခုကိုရည်ညွှန်းရေးတာလားလို့။။။
ရွှေမြင်တင်ရေ…. သုတ္တန်အချို့မှာပါတယ်ဆိုတဲ့ တေဝိဇ္ဇအသုံးအနှုန်းကို ကိုးကားတယ်ဆိုရင် ဘာပြုလို့ သဗ္ဗညုတညဏ်လို့သုံးထားတဲ့ သုတ္တန်အကိုးအကားများကိုကြတော့ လက်မခံရတာလဲ။ ဖြစ်ခြင်းဖြစ် ဒွိဟဖြစ်ရမှာပေါ့၊ အခုတော့ နင့်ဟာက တဖက်သတ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ငါသည်စစ်သားလို့ ပြောခွင့်ရှိပေမဲ့ စစ်သားက သူ့ကိုယ်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလို့ သုံးရင်တက်တက်စင်အောင်လွဲတယ်။ မိမိ ညဏ်တထွာ တမိုက်လောက်နဲ့ ထင်မိထင်ရာ လျောက်မပြောမိဖို့လိုတယ်။ ရွှေမြင်တင်ပေးထားတဲ့ သုတ္တန်တွေမှာလည်း အဲဒီသဘောရှိမလား ပြန်ကြည့်လိုက်အုံး။ လက်တွေ့ ပဋိပတ္တိအကျင့်နဲ့ ဆက်စပ်တွေးကြည့်မှ မြင်ကောင်းတယ်။ အကျင့်ဆိုတိုင်းလည်း မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ရမယ်။ ကမ္မဌာန်းရှုတယ်ဆိုပြီး ပညတ် ပရမတ် မသိ၊ သမထ ဝိပဿနာတောင် မကွဲသူတွေကို သွားမေးရင်တော့ တလွဲအဖြေရလိမ့်မယ်။ ဥပမာကွာ အိန္ဒိယတောထဲက သမထကျင့်နေတဲ့ ဆာဒူးကြီးကိုသွားမေးကြည့်ပါလား။ ဗုဒ္ဓဘုရားကို သူတော်စဉ် တမန်တော်တပါးအဖြစ်ပဲ ပြောမှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓကျင့်စဉ်ကိုလည်း များစွာသော သမထနယ်ထဲက အကျင့်တခုအဖြစ်ပဲ မြင်မှာပေါ့။
မြတ်စွာဘုရားတော်ဟာ အပြောလွယ်ကူသလောက်၊ လက်တွေ့မှာ ခက်ခဲပါလားဆိုတာ ဒီနေ့ ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီမနက်အိပ်ယာထလို့ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ရင်း အရှင်နန္ဒမာလာဆရာတော်
ဟောကြားတော်မူသော ပဌာန်းတရားကိုကြားနာမိပြီး၊ တံသမုဌာနံ ဓမ္မာနံ အပိုဒ်မှ စိတ်ကြောင့်
ရုပ်ဖြစ်ပွားပုံကိုဆင်ခြင်မိ၊ အထင်ရှားဆုံးမှာ ဒေါသဖြစ်လျှင် ကိုယ်အမူအယာကြမ်းတမ်းလာပုံ၊ အပြောအဆိုနှုတ်အမူအယာများလဲကြမ်းတမ်းလာပုံစသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုဗျ၊ ရုံးချိန်နောက်ကျလို့ ကား2ဆင့်စီးရသည်၊ နောက်ကားပြောင်းစီးတော့
ခရီးသည်အပြည့်(ရုံးချိန်ဆိုတော့)၊ ကားပေါ်တိုးတက်တာပေါ့၊ အပေါ်စပယ်ယာက ကားခကောက်၊ အောက်စပယ်ယာက မှတ်တိုင်မေးခြင်း၊တံခါးဖွင့်/ပိတ်ပေးခြင်း သူ့အလုပ်နဲ့သူ။
ကျနော်လဲ အပေါ်ကားခကောက်တဲ့သူဆီကို ကားခပေးရမည်ဆိုတာသိပေမဲ့ အောက်က
သူလက်ထဲမှာလဲ ကားခပိုက်ဆံတွေတွေ့တာနဲ့ သူ့ကိုပဲပေးလိုက်တယ်၊
အောက်မှ –7ယောက်တက်၊
အပေါ်မှ – 6ယောက်ရ၊ 1ယောက်ကျန်တယ်၊ ဒီကငါ့ညီရော ပေးပြီးပြီလားတဲ့၊ အောက်ကို
ပေးလိုက်ပြီ၊ ဟေ့ကောင် မင်းကို ငါပေးလိုက်ပြီလေ၊ မင်းလက်ထဲမှာ 100တန် ကြည့်ကြည့်ကွ၊
ဒေါသလေသံများ၊တုန်ခါသောအမူအယာများဖြင့် အောက်ကစပယ်ယာကို တုံန့်ပြန်ခဲ့မိပြီ။
မိမိကိုယ်မိမိပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ — အော် ငါ့စိတ်ကို ငါ ထိန်းနိုင်ဖို့ လိုပါသေးလားလို့- ——-
အော် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့ ငါးပါးအပေါ် နားလည်မှုလိုသွားတာနဲ့တူပါရဲ့။
ကျနော်က တကယ့်ဘာဝနာပွားနေစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်ပေးနေရသော မဂ္ဂင်တွေကို ပြောချင်တာပါ။ အဲဒီအတွက် ကိုယ်နားလည်ထားသလို ရှင်းပါ့မယ်။ လိုတာရှိလည်း ပြင်ပေးကြပေါ့။
“သီလ” – သီလမဂ္ဂင်ကသုံးပါး။
ဘာတွေလဲဆိုတော့ သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မ န္တ၊ သမ္မာအာဇီဝတို့ပဲပေါ့။ သူတို့သုံးပါးက တရား
အားမထုတ်မီ ရှေးအဖို့ကတည်းက ပြည့်စုံစေရတဲ့ အခြေခံမူလ မဂ္ဂင်တွေပဲပေါ့။
“သမာဓိ ” – သမာဓိမဂ္ဂင်ကလည်းသုံးပါးပဲ။
သမ္မာဝါယာမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိတို့ပါပဲ။ အဲဒီသမာဓိမဂ္ဂင်တွေကတော့ သမထ၀ိပဿနာ အလုပ်ကို အားထုတ်တဲ့အခါမှာမှ ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ အဲဒါလေးလည်း နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်နော်။
သမ္မာဝါယာမဟာ ကိစ္စအားဖြင့် ၄ပါးရှိပါတယ်။ မဖြစ်သေးတဲ့ အကုသိုလ်ကို မဖြစ်အောင် အားထုတ်တာက ၁ ပါး၊ ဖြစ်ပြီး အကုသိုလ်ကို ပယ်နိုင်အောင် အားထုတ်တာက ၁ပါး၊ ဖြစ်ပြီးကုသိုလ် ကို ပွားများပြည့်စုံအောင် အားထုတ်တာက ၁ပါး၊ မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကို ဖြစ်အောင်အားထုတ်တာ က ၁ ပါးဆိုပြီး သူ့ရဲ့ကိစ္စက ၄ ပါးရှိပါတယ်။
သမ္မာသတိကတော့ ရှုမှတ်သင့်တဲ့အာရုံကို အမှတ်ရတာပါပဲ။
သမထအာရုံကို အမှတ်ရတာက သမထသမ္မာသတိ၊ ၀ိပဿနာအာရုံကို အမှတ်ရတာက ၀ိပဿနာ သမ္မာသတိပေါ့။ တနည်းပြောရင်တော့ သတိပဋ္ဌါန် ၄ ပါးသည်ပင် သမ္မာသတိမဂ္ဂင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
တရားစအားထုတ်ခါစမှာ နှာသီးဖျားထိသိအပေါ် သတိထားလို့ သိပေးနေတာသည် သမထ သမ္မာသတိ။ အားထုတ်ရင်းကနေ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောတွေ ဖြိုင်ဖြိုင်မြင်လာတဲ့အပေါ် သတိထားလို့ ရှုမှတ်နေရတာသည် ၀ိပဿနာ သမ္မာသတိလို့ နားလည်ထားပါတယ်။
သမ္မာသမာဓိ ကျတော့ အဲလို သမ္မာသတိနဲ့ အမှတ်ရတဲ့အာရုံမှာ စူးစိုက်တည်ကြည်လာတဲ့အခါမှာ သမ္မာသမာဓိကလဲ ပူးတွဲပါဝင်လာပါတော့တယ်။
“ပညာ” – ပညာမဂ္ဂင်က နှစ်ပါး။
သမ္မာသင်္ကပ္ပ – ၀ိပဿနာယောဂီမှာ ၀ိပဿနာသမာဓိ ကောင်းလာတဲ့အခါ အဲဒီစူးစိုက်မိတဲ့အာရုံကို အမှန်အတိုင်းသိအောင် သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်က စိတ်ဦးညွှတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ညွှတ်ပေးတဲ့ အတိုင်း သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်က အမှန်အတိုင်း သိမြင်တော့တာပါပဲ။ ဘာတွေမြင်လာမလဲဆိုတော့ ရုပ်၊နာမ် ကိုပိုင်းခြားသိမြင်သွားမယ်၊ ကြောင်းကျိုးစပ်ဆက်မြင်လာမယ်။ နောက် ဖြစ်မှု ပျက်မှုသဘောတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာပါတော့တယ်။ အဲလို အမှန်အတိုင်းသိနိုင်အောင် စိတ်ဦးညွှတ်ပုံဖော်ပေးတာက တနည်း ကူညီပေးနေတာက သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ပဲနော်။ ဒါကြောင့် အဲဒီမဂ္ဂင်နှစ်ပါးကို ပညာမဂ္ဂင် နှစ်ပါးလို့ သိထားပါတယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ မဂ္ဂင်လည်း ရှစ်ပါးစုံသွားပါပြီနော်။ ကျနော်က တစ်ချက်တိုးလို့ စဉ်းစားလိုက်တော့
၀ိပဿနာရှုနေဆဲ ယောဂီတစ်ဦးအနေနဲ့ ရှုမှတ်စဉ်မှာ တစ်ပေါင်းထဲ အလုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူ တွေလဲလို့ ပြန်ခွဲကြည့်ကြမယ်။
၁။ ရှုမှတ်တိုင်း ရှုမှတ်တိုင်း ပေါ်လာသမျှအာရုံအပေါ် ရှုမှတ်မိအောင် ကြောင့်ကြစိုက်ပေးနေတာသည် သမ္မ၀ါယာမမဂ္ဂင်ပဲ။
၂။ ပေါ်လာသမျှအပေါ် အမှတ်ရနေတဲ့သတိသည် သမ္မာသတိမဂ္ဂင်။
၃။ ရှုမှတ်မိတဲ့အာရုံမှာ စူးစိုက်တည်ကြည်မှုလဲ ဖြစ်နေတာမို့ အဲဒါသည်ပင် သမ္မာသမာဓိပဲ။
၄။ အမှန်အတိုင်းစိတ်ညွှတ်ပေးနေတာသည် သမ္မာသင်္ကပ္ပနော်။
၅။ အမှန်အတိုင်း သိမြင်နေတာက သမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ပါ။
ဒီတော့ ရှုမှတ်တိုင်း ရှုမှတ်တိုင်းမှာ ဒီမဂ္ဂင်ငါးပါးက တစ်ပေါင်းတည်း ပူးတွဲပြီး ရှုသိခြင်းကိစ္စကို ပြုလုပ်နေတာပဲမလား။ ဒါကြောင့် မဂ္ဂင်ငါးပါးလို့ ကျနော်ပြောလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သည် အလုပ်လုပ် ပေးနေတဲ့ ၀ိပဿနာမဂ္ဂင်ငါးပါးကို လှမ်းကြည့်ပြီး ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သီလမဂ္ဂင်သုံးပါးကတော့ တရားအားမထုတ်မီရှေးအဖို့ကတည်းက ကြိုဖြည့်ထားရမှာမို့ ကျနော် ထည့်မပြောတော့တာပါပဲ။ သူကတော့ မူလမဂ္ဂင်အနေနဲ့ ပါပြီးသားပါ။
အင်း…ရေးရင်းနဲ့တောင် တော်တော်ရှည်သွားပြီ။ ကျနော် ပြောချင်တာလေးတွေက ကျန်သေး တာမို့ ဆက်ပါဦးမယ်။
၀ိပဿနာရှုနေစဉ်မှာ ရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ ဖြစ်ပျက်မှု၊ ဖောက်ပြန်မှုကို ရှုလိုက်လို့ ဖောက်ပြန် ပျက်စီးကို တစ်ချက် မြင်လိုက်သည်နှင့် ခုပြောတဲ့ မဂ္ဂင်ငါးပါးက တစ်ပြိုင်နက် အလုပ်လုပ်နေကြတာပါနော်။ ခန္ဓာရဲ့ အရှိသဘောကို မြင်တာသည် ပညာမဂ္ဂင် ၂ ပါးရဲ့သတ္တိဖြစ်ပြီး ရှုကွက်အပေါ် ရှုဥာဏ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းထားတာသည် သမာဓိမဂ္ဂင် ၃ ပါးရဲ့ သတ္တိသဘောပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ချက် တစ်ချက် ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာ မဂ္ဂင်ငါးပါးက တပြိုင်နက် တွဲတွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေကြတယ်လို့ပဲ နားလည် ပါတယ်။ အဲ အဲဒီမှာသီလမဂ္ဂင်သုံးပါးကတော့ စင်ကြယ်မြဲ စင်ကြယ်နေလျှက်ပါပဲနော်။
နောက်ပြီး ကျနော့ပိုစ့်မှာရေးထားတာလေးကို ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ “အဲဒီမှ တစ်ဆင့် ၀ိပဿနာဥာဏ်ထိတိုင် ကူးလို့ မဂ္ဂင်ငါးပါးနဲ့ ” လို့ဆိုထားတာကြောင့်
မူလမဂ္ဂင်ဖြစ်တဲ့ သီလမဂ္ဂင်ကို အခြေခံလို့
၀ိပဿနာမဂ္ဂင်ဖြစ်တဲ့ ကျန်တဲ့မဂ္ဂင်ငါးပါးတိုင်တက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် အကျိုးရှိပါသေးတယ်လို့ ဆိုလိုပါကြောင်း။
ခုလိုရှင်းပြခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။ နောက်ပို့စ်များရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက် ဝေဖန်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း။